कसरी पुग्यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा विष्णु पौडेलको हातमा? - माइपोखरी न्युज
Home MAIPOKHARI NEWS कसरी पुग्यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा विष्णु पौडेलको हातमा?
काठमाडौं, चैत २८: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव विष्णु पौडेल बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रकरणमा मुछिएका छन्। उनले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै त्यसको खण्डन गरे। तर, सेतोपाटीले यो प्रकरणमा गरेको खोजीले अर्कै तथ्य देखाउँछ।